डेढअक्कलले कुरूप सहर- फिचर - कान्तिपुर समाचार
५० वर्षअघि सिङ्गै उपत्यका सम्पदा क्षेत्र थियो । उपत्यकामा जेजे थिए, ती सबै सम्पदा थिए । सानोसानो झुपडीदेखि दरबारसम्म । तर हामीले ध्वस्त बनायौं ।
रवीन्द्र पुरीपुरातत्वविद्पहिला सबै बस्ती वैदिक हुन्थे  । वैदिक भनेको वास्तुशास्त्रअनुसारको समग्र गृहस्थी र बस्तीको अवस्था हो  ।
यसमा बस्ती कस्तो हुनुपर्छ भन्ने वास्तु शास्त्रले व्याख्या गरेको हुन्थ्यो । त्यस्तै व्याख्याअनुसार हरेक गृह अर्थात् घर र बस्ती विकासको निश्चित विधि हुन्छ । त्यसपछि वास्तुशिल्पी विधि हुन्छ । यो विधि घरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने हो । झिंगटी, झिंगटीमाथि आकर्षक कलाहरू राख्ने भन्ने हो । जस्तो– घर बनाउँदा कुनै कुनामा दुईवटा छाना जोडियो भने त्यहाँ चराको आकार निकालेर देखाउने । पहिले हरेक घर र बस्ती यी विधिहरूमा निर्भर हुन्थे । वास्तुशास्त्र, वास्तु विधि, वास्तुकला, वास्तुशिल्पी सबै छुट्टाछुट्टै विधिअनुसार बन्थे । यी विधि वैज्ञानिक हुन् । घर बनाउँदा हावा कताबाट चल्छ, घाम कताबाट लाग्छ, पानीको बाछिटा कतातिरबाट बढी आउँछ भनेर विचार गरिन्थ्यो । आफ्नो घर र बस्ती कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर तन्त्र विद्याको हिसाबले पनि हेरिन्थ्यो । घर र बस्तीमा धेरै सोचविचार गरिन्थ्यो । यस्ता विधि हजारौं वर्षअघि विकास भएका हुन् । आजकाल आर्किटेक्चर भनेपछि डिजाइन बनाउने, डिजाइनअनुसार घर बनाउनेबाहेक अरू केही हुन छाड्यो ।
पहिले घर मात्रै हैन समग्र समाज व्यवस्थित हुन्थ्यो । हरेक बस्तीमा राजकुलो हुन्थ्यो । सिँचाइका लागि होस् या अकासे पानीको व्यवस्था गर्न राजकुलो हुन्थ्यो । हिजोआज राजकुलो नामै सुन्न पाइन छाड्यो । गाउँ–गाउँमा ढुंगेधाराहरू हुन्थे । त्यो पनि धेरै वैज्ञानिक हिसाबका हुन्थे । जस्तै– सहरको सबै उच्च उचाइमा पहिलो ढुंगेधारा हुन्थ्यो । त्यो ढुंगेधाराको पानी फिल्टर भएर अर्को ढुंगेधारामा जान्थ्यो । त्यसले सहरभरीको खानेपानी व्यवस्थापन हुन्थ्यो ।त्यतिबेलाका सडक अहिले जस्तो गाडी गुड्ने हिसाबले बनाइएका हुँदैन थिए । तैपनि मुख्य–मुख्य सडक निकै चौडा हुन्थे । हरेक समाजमा कुनै न कुनै जात्रा तथा पर्वमा स्थानीयको भीडभाड हुने भएकाले सडक चौडा हुन्थ्यो । जहाँ–जहाँ ठूलो जात्रा हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यहाँको रुटका सडक चौडा हुन्थ्यो । सडकबाहेक खुला ठाउँ हुन्थ्यो । यसको मतलब योजना बनाएर मात्रै पहिलेका घर बन्थे । बस्ती बन्थे । राज सभा ज्योतिष, वास्तुविद्, पण्डित महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूका रूपमा अनिवार्य उपस्थित हुन्थे ताकि नीति नियम बनाउँदा विज्ञता प्रयोग होस् ।
पछिल्लो समय घर बनाउने, बस्ती विकास गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने विषयमा विकृत आउन थाल्यो । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा वास्तुविद् हुँदैनन् । बाहिर भएका विज्ञहरूको कुरा पनि सुनिँदैन । अहिले त्यो खालको परिपाटी छैन । अहिले राजनितिज्ञजस्तो जान्ने सुन्ने कोही छँदै छैनन् जस्तो गरिन्छ । त्यतिबेला र अहिले पनि काम गर्नुपर्ने विज्ञले नै हो । पुरानो ज्ञान लोप हुँदै जान थाल्यो । खागरी राणाकालबाट हाम्रा घर तथा बस्ती बनाउने परम्परा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आयो । अहिले नै हेर्न सकिन्छ, मल्लकालीन घरहरू बलिया छन् । राणाकालीन घरहरू त्यति बलिया छैनन् । राणाहरूले ठूलो चौडा बनाउन थाले । मल्लकालीन प्रविधिलाई राणाहरूले राम्रोसँग बुझ्न सकेनन् । ब्रिटिस र इन्डियन प्रविधिलाई बढी विश्वास गर्न थाले । काठको साटो फलामको बिम प्रयोग गर्न थाले । मल्लकालीन शैलीका घर बनाउँदा निराललाई कहिले पनि ढोका, झ्यालमाथि राखिदैन थियो । जबकि राणाकालीन घर बनाउँदा उनीहरूलाई जहाँ सजिलो भयो, त्यहीँ राख्न थाले । ब्रिटिस प्रविधि राणाकालमा भित्रिएको हो । त्यसको एउटा उदाहरण सिंहदरबार भवन हो । तिनै भवनहरू अहिले चर्किएका छन । बिम झ्याल र ढोकामाथि राखेका कारण बढी क्षति भएको पाइन्छ । ९० साल र ०७२ सालको भूकम्पमा पनि राणाकालीन भवनमा बढी क्षति भयो ।
मल्लकालीन शैलीका घरहरूका फाइदा धेरै छन् । माटो र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेरै घर बनाइन्थे । सुर्कीर्, काठ प्रयोग गरिन्थ्यो । मल्लकालीन घरका दुई बेफाइदा थिए । होचा र उज्यालो कम भएका घर हुन्थे । राणाहरूले अग्ला र उज्यालो बढी भएका घरहरू बनाए । यसलाई सकरात्मक रूपमै लिनुपर्छ । तर राणाहरूले सिमेन्ट र डन्डीहरूको भित्र्याएका हुन् । हाम्रो सहर एकदमै कुरूप भएको सिमेन्ट भित्रिन थालेपछि हो । नेपालीहरू बढी घुम्न जाने ठाउँ भारत र बेलायत नै हुन् । नेपालका इन्जिनियरहरू पनि भारत, रसियाबाट पढेर आउन थाले । उनीहरूले डन्डी र सिमेन्टले घर कसरी बनाउने भन्ने सिकेर आए । त्यहीँबाट नै प्रभावित भएर नेपालमा पनि सिमेन्टको प्रयोग बढ्न थालेको हो । धन, सम्पत्ति, पद भएकाहरूले सिमेन्टको घर बनाउन थाले । सिमेन्टले ढलान गरेको घर बनाउनु प्रतिष्ठाको विषय हुन थाल्यो ।
पुराना घर सखाप हुँदै गए । ढुंगेधारा, बाटोघाटो पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन थाले । राणाकालमै कल धारा आएको हो । पाइप लगाएर ल्याउने धारालाई कल धारा भनिन्थ्यो । कल धाराको पानीभन्दा ढुंगेधाराको पानी मीठो र हाइजेनिक (स्वस्थ) हुँदाहुँदै प्रयोग गर्न छाडियो । कलधारामा आकर्षण भयो । कलधारा घरघरमा आउने भयो । ढुंगेधारा घरघरमा हुँदैन थियो । ठूलाबडाले घरघरमै धारा राख्न थालेपछि अरूले यसैको सिको गरे । ढुंगेधारा, इनार मासिँदै गए ।
नयाँ प्रविधि र विकास कसैले रोक्न सक्ने कुरा भएन । तर पुरानै ठाउँमा भत्काएर नयाँ विकास गर्नुचहिँ हाम्रोमा गलत भयो । हाम्रा पहिलेका र अहिलेका शासकहरू विदेशमा पढेर पनि आएका थिए । राज परिवारमा पनि धेरैजना विदेश पढेर आएकाहरू हुन्थे । उनीहरूले समेत पुरानो प्रविधिलाई संरक्षण गर्न नसक्नु धेरै ठूलो विडम्बना हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै कुरा गुमाइसक्यौं । यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
हामी पुरानो ठाउँलाई संरक्षण गरेर नयाँ, आधुनिक र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सक्थ्यौं । हामीसँग गौरव गर्न लायक धेरै सम्पदा हुन्थे । ५० वर्षअघि सिँगै उपत्यका सम्पदा क्षेत्र थियो । उपत्यकामा जेजे थिए, ती सबै सम्पदा थिए । सानोसानो झुपडीदेखि दरबारसम्म सबै सम्पदा थिए । संरक्षण गर्न नपर्ने केही पनि थिएन । मैले मात्र अहिले भनेको होइन । नेपाल आएका टोनि हेगन, बोरिसजस्ता मान्छेहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि काठमाडौं उपत्यका संसारकै सबैभन्दा ठूलो र धेरै सम्पदा भएको क्षेत्र हो भनेका थिए । संसार देखेको मान्छेले भनेको कुरा त पत्याउनुपर्‍यो नि । उनीहरूले भनेअनुसार धरै सम्पदा भएको क्षेत्र दोस्रो विश्व युद्धअघि युरोप थियो । विश्वयुद्धमा मुख्यमुख्य सहर सबै ध्वस्त भए । दोस्रो विश्वयुद्धले जति सक्यो, त्योभन्दा बढी त्यसपछिको विकासले सिध्यायो । त्यहाँ उनीहरूको आफ्नै कारणले भएको हो । हाम्रो त युद्धले ध्वस्त भएको हैन । हामील आफै ध्वस्त बनायौं ।
मल्लकालमा भएका पुरानो प्रविधि, सम्पदा, बस्ती विकासको संस्कृति २० प्रतिशत मात्र बचाउन सकेको भए अहिले हामी धेरै अगाडि हुन्थ्यौं । त्यतिबेलाको तुलनामा हामीसँग अहिले ५ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । यसमा दरबार स्क्वायर र केही घर मात्र हुन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का कति जनालाई यसबारे थाहा छ ? उनीहरूलाई केही थाहै छैन । यो सबै बुझ्दै नबुझेर ध्वस्त भएको हो । हाम्रा नेताले बुझ्ने कोसिस पनि गरेनन् । ३ वर्ष अघिको मन्त्रिपरिषद्ले त सिंहदरबार भत्काउने निर्णय नै गरिसकेको थियो । सिंहदरबारलाई बचाउने भनेर हामीले अभियानै चलायौं । नभत्काउने भन्ने निर्णय भयो तर खै बचाएको ? त्यो अब त्यतिकै सकिन्छ । पानी छिरेको छ । संरक्षण भएको छैन ।
२५/३० वर्षयता झन बढी बिग्रिएको हो । म ०४१/०४२ सालतिर कानुन पढ्थेँ । घर फर्कदा ट्रलीबस चढ्थे । कहिलेकाहीँ बागबजारबाट मैतेदेवी हुँदै हिँडेर पुरानो बानेश्वर हुँदै नयाँबानेश्वर पुगेर ट्रली बस चढ्थेँ । पुतली सडकदेखि डिल्लीबजारको उकालो चढेर ओर्लिंदा दायाँबायाँका घरहरू यति राम्रा थिए कि त्यहाँ हिँड्दा अर्कै मजा हुन्थ्यो । अहिले त्यहाँ एक/दुईवटा मात्र घर छन् । मैले देख्दा सम्म सत प्रतिशत त्यहाँ पुराना घर थिए । त्यस्तै अर्को ठाउँ सोह्रखुट्टेबाट सामाखुसी जाने बाटोको दायाँबाया पूरै पुराना घर थिए । अझै पनि हामी जस्तो मान्छेले आस गरिरहेका छौं । हाम्रा घर, बस्ती, परम्परा, संस्कृति अझै सपार्न सकिन्छ । पाटन, काठमाडौं, भक्तपुरका मुख्य क्षेत्रलाई पुरातन हिसावले जोगाउन सकिन्छ । भूकम्प अघि सम्म साँखुमा घर–घर अगाडीबाट पानी बग्थ्यो । राजकुलो थियो । यस्ता ठाउँ अझै छन् । जोगाउन नसक्ने कुरै छैन । यसका लागि स्थानीय तहका सरकारहरू तयार हुनु पर्‍यो । पाटनमा जतिवटा चोक छन्, त्यति संसारको कुनै पनि ठाउँमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई । पाटन भनेको चोकैचोकको सहर हो । धेरै अतिक्रमित भएका छन । चोक छ, त्यही पेलेर घर बनाइएको छ । एउटा चोकमा २/३ जनाको घर हुन्छ । त्यसपछि तैं चुप, मै चुप भयो । यसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन महानगरपालिकाहरूले नीति ल्याउनुपर्‍यो । दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने पाटनलाई चोकैचोकको सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुँदै जान्छन । सवारी साधनमुक्त ठाउँ बनाउन सकिए चहलपहल अर्कै हुन्छ । पनौतिलाई पनि चोकैचोकको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । काठमाडौंको मुख्य क्षेत्रमा सवारी साधनमुक्त बनाईदिने हो भने विकास आफै हुन्छ । सवारी साधनमुक्त भएपछि त्यो सांस्कृतिक सहर बन्छ । महानगरपालिकाले बाटोमा ढुंगा छापिदिओस् । भोटाहिटी, असन, ज्याठा, इन्द्रचोक, विष्णुमतीसम्म सवारीसाधनमुक्त ठाउँ बनाऔं । यो ठाउँ घुम्न विदेशी पर्यटक नै चाहिदैन । नेपाली नै कहाँकहाँ जाऊँ भइरहेका छन् ।
हाम्रो निजी क्षेत्रले आफैं काम थाल्छ । मुख्य गरी केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार मिल्ने हो भने असम्भव केही छैन । काठमाडौं, भक्तपुर, पाटनले गुमाएका धेरै कुरा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । यो काम गर्न हाम्रो सरकारसँग स्रोतको अभाब पनि म देख्दिनँ । ५/१० वर्ष अघिसम्म पैसा कम हुन्थ्यो । तर अहिले प्रशस्त पैसा भएरै चाहिने नचाहिने ठाउँमा सरकारले खर्च गरिरहेको छ ।
म केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई एउटा नमीठो उदाहरण भन्न चाहन्छु । पनौती परम्परागत शैलीकै सहर बनाउन सकिन्छ कि भनेर म विगत १० वर्षदेखि लागी रहेको छु । जोहो गरेर, कहीं कतैबाट सहयोग जुटाएर पनौतीलाई आकर्षक बनाउने मेरो योजना छ । तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले घर, मन्दिर, सार्वजनिक स्थलमा इनामेल ल्याएर दलिदियो । गारो, काठ, इँटा सबैमा पेन्ट गरिदियो । सम्पदालाई राम्रो बनाउन यस्तो गरेको रे । इनामेल दलेर सम्पदा राम्रो हुँदैन । विज्ञलाई सोधिखोजी गरिँदैन । आफ्नै डेढ अक्कल लगाएर काम गर्छन् । मौलिकता जोगाउन खरकै छाना हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । गाउँ घरमा जे पाइन्छ त्यसलाई त्यही उपयोग गर्ने हो । त्यस्तो मौलिकता भूकम्पपछि बारपाकले पनि गुमायो । फोटोमा बारपाक बर्बाद नै भएको देखिरहेको छु । भूकम्पअघिको सून्दर बारपाक पुनर्निर्माणको क्रममा बिगारे । पुराना घर भूकम्पमा कुनै ढले कुनै ढलेनन् । ढलेका किन ढले, नढलेका किन ढलेनन् भन्ने अनुसन्धान नै भएन । सरकारले राम्रो मोडल दिएर सबैतिर सिकाउनुपर्थ्यो । सिकाएन, छाडिदियो । भूकम्पपछि धेरै सहर झन् बिग्रिए ।
तैपनि अझै सुधार गर्न सकिन्छ । सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने हो । यतिसम्म च्यातिइसक्यो कि कहाँबाट सिउने भनेर धागो र सियो हातमा लिएर अलमलिनुपर्ने अवस्था भने छ । तै पनि स्थानीय सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने हो । ठीक उल्टो देखिरहेको छु । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर सम्पदाको दुस्मनका रूपमा देखापरेका छन् । हाम्रा शासकहरूले सम्पदा के हो भनेर बुझेकै छैनन् । बाँकी रहेकोलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बेला उल्टै भत्काउने बिगार्ने कुरा गर्छन् । बाँकी सम्पदा पनि सकिने हुन् कि भन्ने डर हुन थाल्यो ।
तीनवटा दरबार स्क्वायर विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले त्यहाँचाहिँ आँखा लगाइसकेका छैनन् । विश्वसम्पदा सूचीकृतलाई के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा नै थाहा छैन । यसमा जनस्तरबाट पनि सुधार गर्न जरुरी छ । आफ्नै घर कलात्मक बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ । घर आफ्नो आधाभन्दा बढी समय बिताउने ठाउँ हो । पुरानै शैलीका घरहरू प्राकृतिक कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर बनाउनुपर्‍यो । पहिलेको प्रविधि महँगो पनि होइन । कलात्मक घर बनाउन जनशक्तिको कमी छैन । म एक्लो मान्छेले त गरिरहेको छु । सरकार र स्थानीय तहले लागिपरेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने झन् कति हुन्थ्यो होला ? मैले ८० वटाभन्दा बढी हेर्दै गौरव गर्नलायक घर बनाएको छु । विद्यालय बनाउँदा गाउँभरिकालाई गौरव छ । निजी र सार्वजनिक गरेर १ सय संरचना बनाइसकेँ । मल्लकालमा जुन प्रविधि प्रयोग हुन्थ्यो, हुबहु गर्न सकिन्छ ।
ज्ञान बाँड्न म तयार छु । प्रविधि सिकाउन तयार छु । मै खाऊँ मै लाऊँ भन्दिनँ । कोही परम्परागत रूपको पाँचतले मन्दिर बनाउँछु भनेर आयो भने सकिन्छ । राज्य, स्थानीय तह, सर्वसाधरणले पनि चाहने हो भने धेरै कुरा फर्काउन सकिन्छ । संसारको नमुना सहर देखाउन सक्ने क्षमता, सामर्थ्य बाँकी नै देखेको छु तर चाहना हुनुपर्‍यो । सबै बिग्रियो, भत्कियो, सकियो भनेर मन दुखाइरहनुको सट्टा केही गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
कृष्ण आचार्य र विमल खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३९
विपद्ले उकासेको व्यापार
२०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । भाउ पनि अकासिएको थियो ।
भाद्र ३१, २०७६ कञ्चन अधिकारी
धादिङ सिद्धलेक–२ का युवराज अर्याललाई दुई वर्षअघि दुइटा टिपरले निर्माण सामग्री ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो  ।
उत्तरी धादिङदेखि काठमाडौंसम्मबाट इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टको अर्डर आउँथ्यो । सामान पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै खाना खानसमेत भ्याउँदैन थिए उनी । ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । गएको चैतदेखि उनको टिपरले मुस्किलले दिनको एक ट्रिप मात्रै निर्माण सामग्री बोक्छ । काम पाउन छाडेपछि एउटा टिपर बेचिसके । उनी भन्छन््, ‘भूकम्प गएको करिब १० महिनापछि गत वर्षसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । अहिले त काम पाउनै मुस्किल छ ।’
२०७२ वैशख १२ गतेको महाभूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्ट, रङलगायतका निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । धेरैजसो घर बनिसकेपछि भने निर्माण सामग्रीको कारोबार घटेको छ । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालका अनुसार भूकम्पपछिका २ वर्षमा पीडित आफैंले पनि घर बनाउने र दातृ निकायले पनि भवन निर्माण गरिदिनाले निर्माण सामग्रीको माग बढेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले आपूर्ति गर्न पनि सकेनौं,’ उनले भने । सामान्य अवस्थामा सिमेन्ट र इँटा आयातको दर कम भए पनि त्यो बेला भारतबाट समेत झिकाउनुपरेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ३२ जिल्लामा करिब १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घर भत्किएका थिए । त्यसमा पनि १४ जिल्लाका बढी प्रभावित भएका थिए । भदौ अन्तिम सातासम्ममा ४ लाख ४० हजार ५ सय ६० घर बनिसकेका छन् । २ लाख ९ सय ९ सय ९६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् ।
अग्रवालका अनुसार २०७२ को चैतसम्म निर्माण सामग्रीको खासै माग भएन तर २०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म अत्यधिक माग भयो । उनले भने, ‘भूकम्प गएको ५ महिनासम्म परकम्प जाने क्रम जारी थियो । त्यो बेला घर बनाउन सबै डराए । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो र माग भए पनि सामग्री पाउन सकेनन् ।’ नाकाबन्दीको समयमा माग भए पनि सामग्रीको अभावले चाहेजति आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए ।
नाकाबन्दी खुल्नुका साथै परकम्प पनि कम भयो, भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका आयो र अन्तर्राष्ट्र्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग घोषणा गरे । सँगै सरकारले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम दियो । त्यसपछि भवन निर्माणको काम तीव्र भयो । निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि निर्माण उत्पादकले मूल्यसमेत बढाए । यी दुई वर्षलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको सुनौलो युगका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीले परिभाषित गरेका थिए ।
टिपरधनी अर्यालले निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएका बेला कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा साना ट्रकहरू विस्थापितसमेत भएको सुनाए । उनले भने, ‘व्यापारीले एकैपटक धेरै सामान बोकेर जाने ठूला ट्रक गाउँगाउँ लैजान थाले । यसका लागि सडकहरूसमेत चौडा पारिए । गाउँमा साना ट्रकहरू बिस्तारै विस्थापित भए ।’ अर्यालका अनुसार ढुंगा माटोबाटै पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिने भए पनि भूकम्पपीडितले आधुनिक डिजाइनका घरहरू बनाउँदा पनि निर्माण सामग्रीको माग उच्च रहेको थियो । उनले भने, ‘गाउँमै प्राप्त साधनस्रोतबाट पनि घर बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले भवन निर्माण निर्देशिकामार्फत स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई भन्दा पनि गिट्टी, बालुवा र रडबाट घर बनाउन प्रेरित गर्ने किसिमले संहिता ल्यायो ।’
माग अत्यधिक भएपछि व्यवसायीले २०७३ सालपछि सबै निर्माण सामग्रीको भाउ ह्वात्तै बढाए । धादिङमा गिट्टीको कारोबार गर्ने समीर श्रेष्ठका अनुसार केही निर्माण सामग्रीमा शतप्रतिशत भाउ बढाइएको थियो । उनका अनुसार भूकम्पअघि एक टिपर बालुवाको १५ दखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । भूकम्पपछि त्यही एक टिपर बालुवाको ३३ हजारसम्म पुग्यो । ‘अहिले भाउ केही घटेर २७ देखि २९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने ।
अग्रवालले त्यतिबेला स्टिल, रडको भाउ पनि अकासिएको बताए । उनका अनुसार उच्च माग हुँदा होलसेलमा एक किलो फलामको ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । ‘चैतयता भने समग्र निर्माण सामग्रीको व्यापार खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फलाम, स्टिलको होलसेल मूल्य ७३ देखि ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।’ ठूला परियोजना नबन्नु, नयाँ परियोजना नथालिनुजस्ता कारणले मूल्य घटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारले ठूला परियोजना नबनाउँदा हामीलाई समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।
पुनर्निर्माणको काम पनि सकिन लागेको र नयाँ पूर्वाधार नबनेको हुनाले निर्माण सामग्री उत्पादक तथा व्यवसायीमा चिन्ता थपिएको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष हामी उत्साही भएका थियौं । फेरि बिस्तारै बजार खस्किन थालेपछि चिन्तित बनाउन थालेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का दुई महिनाको व्यवसाय निराशाजनक रहेको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई महिनाले यो वर्ष राम्रो हुने लक्षण देखाएको छैन । सरकारले परियोजना ल्याएको पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे धेरै व्यवसायीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।’
रङमा परेन प्रभाव
रङ व्यवसायीलाई भने भूकम्पपछि त्यति धेरै उत्साही नबनाएको पेन्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्व साख बताउँछन् । भूकम्पपीडितले घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टमा खर्च गरेका उनको बुझाइ छ । ‘रङ लगाएर घर राम्रो र टिकाउ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘बरु रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने गाउँ र सहरमा रङको माग बढेको छ ।’ विदेशका घरमा देखेर फर्किएका र पैसा भएका सहरियाहरू रङप्रति बढी सजग रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूकम्पपछि बनेका घरहरूमा रङ लगाउनेचाहिँ कम नै छन् ।’ सरकारले दिएको अनुदान भवन निर्माणमै सकिएर मानिसले रङ किन्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिले कामचलाउवाला कमसल रङ प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने । साखले नेपालमा डिस्टेम्पर र इमल्सन रङको माग बढी रहेको बताए । उनका अनुसार २० किलो डिस्टेम्पर रङको १५ सयदेखि २५ सय र इमल्सनको ६ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा करिब १७ वटा रङ उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । ३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३८